DAAWO: Faysal A. Waraabe oo ku maadeystay go’aankii DFS ka qaadatay Khilaafka Carabta & Dad Beeshiisa ah oo lagu xasuuqay.. | Baahin -News, Sports, Views, Entertainment, War On Terror, Health and Social Affairs
DAAWO: Faysal A. Waraabe oo ku maadeystay go’aankii DFS ka qaadatay Khilaafka Carabta & Dad Beeshiisa ah oo lagu xasuuqay..
Hogaamiyaha Xisbiga mucaaradka ah ee Somaliland Faysal Cali Waraabe ayaa si maadeysi ah uga hadlay Khilaafka ka dhex taagan Wadamo uu hormuud uyahay Sacuudiga & dalka Qatar.
Shir Jaraa’id oo uu maanta qabtay ayuu Faysal Cali Waraabe sheegay in danta Somaliland ay ku jirto in la taageero Somaliland, laakiin uu la yaaban yahay go’aankii dowladda Soomaaliya.
Isagoo muujinaya sida uu uneceb yahay Soomaaliya ayuu Faysal Cali Waraabe sheegay inuu ka xun yahay in xisbiga Wadani uu dhex dhexaad ka noqday siyaasadda Khaliifka “Waxaan ka xumahay in xisbigii ugu horeeyay ee S/Land ah uu ku fikir noqdo dowladda been beenta ah ee kor laga haysto ee Xamar”ayuu yiri Faysal Cali Waraabe.
Dhanka kale, waxaa uu ka hadlay dilal iyo dhibaateyn joogta ah oo dad kasoo jeeda Beeshiisa loogu geysto degaanada xaduuda ah ee Somaliland iyo Soomaali Galbeed Itoobiya.
“Dadkeena halkaas jooga dhibaato ayaa lagu hayaa, mana jirto cid wax uqabaneysa”ayuu yiri Faysal Cali Waraabe.
Si kastaba, Gudoomiyaha Xisbiga UCID ayaa hal arin farxad ka muujiyay taas oo ah in la cayimay waqtiga doorashada Somaliland halka uu sidoo kale rajeynayo in wadahadaladii S/Land iyo Khaatumo lasoo gaba gabeeyo dhawaan.